Dhakhtar Somali Kenyan ah oo ku Xiran Puntland
PUNTLAND - BOOSAASO
SomaliTalk.com | May 21, 2008
Dr. Ibraahim G. Cali ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii (May 20, 2008) laga siidaayey xabsiga ama jeelkii uu kaga jirey magaalada Boosaaso, sidaas waxaa SomaliTalk.com u xaqiijiyey xubno u dhow qoyska dhakhtarka.
Siideynta dhakhtarka ayaa ku soo beegantahy xili uu gelinkii dambe ee Talaadii magaalada Boosaaso ka soo degey Gen. Cadde Muuse oo Puntland ka maqnaa muddo 52 maalmood ah.
Dr. Ibraahim waxaa la xiray (May 2, 2008) isagoo ka dhoofayey garoonka diyaaradaha ee Boosaaso kuna sii jeedey Kenya. Sidii loo xiray iyo warbixinadii hore hoos ka akhri.
Koox wariyayaal ah oo ka tirsan SomaliTalk oo Nairobi kula kulmay Qoyska Dr. Ibraahim Gorijo Cali, oo ah Dhakhtar Somali-Kenyan ah oo ku xiran Maamul Goboleedka Puntland.
Waxgarad iyo Odoyaal si weyn isugu Hawlaya sii Deynta Dhakhtar Somali-Kenyan ah oo ku xiran Boosaaso.
Dr. Ibraahim G. Cali
SomaliTalk.com, Nairobi: May 13, 2008
Balqiisa Saciid Baana oo ah marwada Dr. Ibraahim Gorija Cali asalkiisuna yahay Soomaali, ayaa sheegtay in seygeedu uu ku xiran yahay Puntland, isagoo lagu eedeeyey inuu xiriir la leeyahay "argagixiso", iyadoo muujisay iney ka xun tahay xarigiisa.
Waxey sheegtay Balqiisa inuu dhaqtarku la soo xiriiray wakhti yar uun ka hor mar uu doonayay inuu dib ugu soo laabto Kenya, hase yeeshee muddo kadib uu soo wacay isagoo u sheegay inuu xiran yahay, isla markaana lagu heysto baasaboorkiisa laguna eedeeyey "argagixisanimo".
Sidoo kale Rabiic C/kariim Xirsi oo ah Sheybaariiste ay wada shaqeeyaan Dhaqtarka xiran ayaa u sheegay Somalitalk in saaxiibkiis lagu heysto Baasaboorkiisa oo Soomaali ah iyo isagoo aan si fiican ugu hadlin Afka Soomaaliga.
"Waxaan aaminsanahay xiddigta shanta gees ee Soomaaliyeed inay Soomaali sidaas ku tahay, ninkii ka mid ah shantaas Gobol oo Soomaalidana uu Baasaboorka Soomaalida xaq u leeyahay in uu qaato. Dhakhtarkana Soomaali Kenyan weeye, sidaas darteed ayaanaan u garawsan karin in Puntland yiraahdaan baasaboorka ma uu laha, waana xaq darro in ay yiraahdaan, saas kuma garawsan karo," ayuu yiri Rabiic oo asalkiisu ka soo jeeda Puntland.
Wuxuu sheegay Rabiic iney wadaan dadaallo ku aaddan sidii loo soo deyn lahaa Dhaqtarka, "Dhaqtarku amaanadeenuu ahaa gacanteena ayuuna ku jiray, marka waxaan wadnaa dadaallo aan jecelnahay in lagu soo daayo" ayuu yiri.
Dr. Ibraahim Gorija Cali
Rabiic oo Dhaqtarka markii hore geeyey Puntland si uu uga hawlgalo xarun caafimaad oo ay ku leeyihiin deegaannadaasi laguna magacaabo Salaama Medical Centre, ayaa sheegay inuu yahay Dr. Ibraahim nin aqoon u leh qaliinka, isla markaana ka soo shaqeeyey xarumo caafimaad oo ku yaala Kenya.
Rabiic waxaa uu ku celceliyay in dhakhtarku uusan wax xiriir ah la lahayn Howlaha lagu eedeeyey.
Dhaqtar Ibraahim ayaa la sheegay in maamulka Puntland qeybtiisa socdaalka ay ka soo qabteen garoonka diyaaradaha Boosaaso ayna ku wareejiyeen hay'adda loo yaqaan "argagixiso la dirirka" ee maamulkaasi, inkastoo ay saaxiibadiis rajo ka muujiyeen sii deyntiisa, maadaama ay ku doodeen inaanu ehel u aheyn waxa lagu soo eedeeyey, ayaaney haddana ilaa hadda ka hadlin mas'uuliyiinta maamulka DGPL.
Somalitalk � Nairobi, Kenya.
SomaliTalk.com, Bosaso, May 14, 2008
Dhakhtarka Kenya u dhashay oo asalkiisu yahay Soomaali oo lagu Magacaabo Dr.Ibraahim ayaa Muddo Labo Todobaad ku dhowaad ah ku xiran Xabsi ay leedahay Hay'adda Sirdoonka Puntland ee PIS.
Xiriir aan la sameynay dad arrintiisa ka war qaba ayaa xaqiinaya inay jiraan dadaalo ay wadaan Odoyaal iyo Waxgarad , kuwasoo xiriir la sameeyay Masuuliyiinta Amaanka ee Puntland.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in rajo weyn laga qabo in maalmo dhow la soo siidaayo Dr. Ibraahim oo ilaa iyo iminka wax uu ku eedeysan yahay aan la ogeyn.
Saraakiisha Hay'adda PIS ayaa la sheegay inay ka balan qadeen Odoyaasha iyo Waxgaradka u tegay inay siidaynayaan Dr.Ibraahim.
Waxgaradka iyo Odayaasha isku hawlaya siideynta Dhakhtarka ayaa ah kuwo ku xirnaa Dr.Ibraahim markii uu shaqeynayay iyo kuwo kale oo si islaamnimo ah arrintiisa u galay kadib markii ay ka warheleen.
SomaliTalk.com | Bosaso | May 14, 2008
Dhakhtar u Dhashay Somali-Kenya oo ku Xiran Puntland...
SomaliTalk.com, Bosaso, May 12, 2008
Mudo Todobaad ah ayaa Dr. Ibraahim oo ah Dhakhtar u dhashay Kenya waxa uu ku xiranyahay xarun Qarsoodi ah oo ay leedahay Hay'adda Sirdoonka Puntland ee PIS.
Dr.Ibraahim oo ah u dhashay Kenya, ahana Dhakhtar Muslim ah ayaa qaabilsanaa qaybta Qaliinka, waxana uu ka shaqeynayay Cusbitaal lagu magacaabo Salaama oo ah kuwa sida gaarka ah loo leeyahay.
Cusbitaalka uu ka shaqeynayay Dr. Ibraahim oo aan ka mid ahaa macaamisha ku xiran ayaan booqday aniga oo raadinaya warka ku saabsan xariga dhakhtarka kadibna waxaan la kulmay qaar ka mid ah hawl wadeenada cusbitaalka oo iiga waramay sida wax u dhaceen.
Mid ka mid ah shaqaalaha Cusbitaalka oo aan dooneyn in aan Magaciisa xuso ayaa sheegay in Dhakhtar Ibraahim iyo Mulkiilaha Cusbitaalka oo lagu Magacaabo Ridwaan ay qabteen Ciidamada Sirdoonka ee Garoonka Diyaaradaha Boosaso xili la sagootin lahaa dhakhtar Ibraahim oo u socday dalkiisii hooyo kadib mudo bil ah oo uu fasax ka qaatay shaqadiisii Boosaso.
Ninka dhalinyarada ah ee Cusbitaalka ka shaqeynayay ayaa sidoo kale ii xaqiijiyay in dhowr maalmood kadib la soo siidayey Ridwaaan oo ah mulkiilaha Cusbitaalka inkasta oo aysan ii suurta gelin in aan la kulmo.
Xariga Dr.Ibraahim ayaan inta badan dadweynaha Boosaso aysan ka warhayn ilaa iyo hadana waxa la isweydiinayaa sababaha keenay xarigiisa oo lagu haysto.
Ninka ka mid ah shaqaalihii ay wada shaqeyn jireen Dr.Ibraahim oo aan weydiiyay sababta dhakhtarka loo haysto ayaa qaab uuna hubin oo male ah iigu sheegay labo arrimood oo kala ah:
Dr. Ibraahim in lagu eedeyay in uu wato Baasaboor Soomaali ah islamarkaasna dhalashadiisu ay tahay Kenya.
Qodobka kale ayaa ah in Cusbitaalka uu ka shaqeynayay Ibraahim ee Salaama lagu eedeynayo halka lagu daweeyo Dadka Dowlada ay iska horyimadaan sida la sheegay in ay dhacday dhowr jeer oo Cusbitaalka la dhigay dad dowladu ay waxyeeshay oo dhaawacyo culus ahaa kadibna Dr.Ibraahim qaliino ama gargaar caafimaad u sameeyay.
Qof ka warhaya qoyska Dhakhtarka oo SomaliTalk.com kala soo xiriiray Kenya ayaa sheegay in "Dr. Ibraahim uu beel ahaan ka soo jeedo beesha GABRO, oo inka kasta oo uusan Af-Soomaaliga si fiican u aqoon haddana asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Soomaali, waxana uu muddo 9 bilood ah ka shaqaynayey Salama Medical Center ee Boosaaso." Waxana uu xaqiijiyey in la xiray isaga oo ka soo dhoofayey Garoonka Boosaaso. Waxana uu intaas ku daray in "reerkiisa ay aad u wal walsanyihiin." "Dhakhtarku waxa uu ka shaqyn jiray Kenyata Hospital," ayuu yiri, isaga oo intaas ku daray "Soomaalida Kenya deggan waxaa ay ku taqaanay Madina Nursing Home iyo Cilinigiisa DIGFER oo ku yaala xaafadda Islii oo soomaalida uu ugu naxariisan jiray Kaar lacag la' aan ah maalmaha Khamiis kiliinigiisa."
Sikastaba, Hay'adda Sirdoonka Puntland ee PIS ayaa iska xirta dadka ajaanibka ah ee muslimka ah, qofkii ay xiraana cidna looma ogola inay booqdaan ama xaaladisa war lagama helo.
Wixii war ah ee ku saabsan Xariga Dr.Ibraahim kala soco Halkaaan.
Faafin: SomaliTalk.com | May 12, 2008